ယောက်ျားနဲ့ဝေးနေချိန် – Grab Love Story
by phyu May 17, 2021
အဖြေမပေးခင်ကတည်းက…လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်ဘဝထဲမှာလည်း…ကိုညီကရောက်နေတာလဲကြာပြီ။အသက်ကလဲ…မီမွန်ထက်ပိုကြီးတော့…အစစအရာရာကူညီပေးရင်းနဲ့…ရင်းနှီးခဲ့ကြတာပါ…Departmentမတူတော့လည်း..ပိုပြီးကောင်းပါတယ်… တူနေရင် ကြိုက်ဖြစ်ချင်မှ ကြိုက်ဖြစ်မှာပါ
ဒီလိုနဲ့အိမ်ပြန်ချိန်ရောက်လာတော့…ယူနီဖေါင်းလဲပြီး..အောက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။ကားဂိတ်မှာအသင့်စောင့်နေတဲ့….ဝေမင်းကိုတွေ့တော့ပြုံးပြလိုက်တယ်။သူကTaxiမောင်းတော့… အိမ်အပြန်မပူရဘူးလေ။နေ့တိုင်းတော့မဟုတ်ပေမယ့်….တစ်ပါတ်ကို…လေးငါးရက်လောက်ကြိုတော့…အဆင်ပြေတာပေါ့ ။
“မေးကြည့်တာပါ….ကားမဆွဲတော့ဘူးလေ….နေ့လည်က ပွိုင့်တစ်ခုက ရလာသေးတယ်”
မီမွန်အလုပ်လုပ်တဲ့ဟိုတယ်က…ရွှေဂုံတိုင်ဖက်ကဆိုတော့…နီးနီးနားနားဖြစ်အောင်…အင်းယားလမ်းက ဟိုတယ်တစ်ခုပဲ မောင်းလာလိုက်တယ်။အဲဒီ့မှာက….တစ်ဆက်ရှင်တစ်သောင်းခွဲဆိုတော့..အိုကေပဲ။အခန်းထဲရောက်တော့…ရေချိုးခန်းထဲဝင်ပြီး…အဝတ်ချွတ်ကာတာဝါတစ်ထည်ပတ်ထားလိုက်တယ်။
ကုတင်ပေါ်ရောက်တော့…တီဗီဖက်မှာ..ဝေလင်းကPen.Driveတစ်ချောင်းနဲ့တီဗီမှာအလုပ်ရှုပ်နေတယ်။ဒီနေ့သူ့ဖုန်းနဲ့ ဒေါင်းထားတာတွေကိုပြမလို့နေမှာ။(Ps: Pen Drive က Opticalနော်…ဆရာကြီးမဟုတ်တဲ့လူတွေအတွက်ရှင်းပြတာပါ)
တံခါးဖွင့်လိုက်တော့…ဝိတ်တာကောင်လေးဝင်လာပြီး….မျက်လုံးတွေက..မီမွန့်ဆီမှာပဲဆိုတာသိနေတယ်….ဘယ်ယောက်ကျားမှ…ဒီဘော်ဒီ ဒီပို့စ်နဲ့ကတော့ နှစ်ယောက်ထဲကဆိုရင် အတင်းကျင့်ခံရမှာ။မီမွန်လဲ…ကြည့်နေမှန်းသိတော့မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး…တီဗီထဲမှာအာရုံရောက်နေသလို..လုပ်နေလိုက်တယ်။
အခန်းထဲမှာလဲ…ယောက်ကျားကဖုန်းတစ်လုံးကိုင်ပြီးVDO ရိုက်နေတာ…နောက်တစ်ယောက်ကကောင်မလေးကို…မျက်နှာဖုံးစွပ်ပြီး ဗျင်းနေတာ။ဝေမင်းကတော့မသိသလိုနဲ့… ဖုန်းကြည့်ပြီးတော့…ဝိတ်တာလေးလာပို့တဲ့Blcakshield ကိုလှမ်းယူလိုက်တယ်။
“ရတယ် အကို Check out ထွက်မှ ရှင်းလဲ ရတယ်”
ဝိတ်တာကောင်လေးထွက်သွားတော့……ဝေမင်းလဲပက်လက်လေးဖြစ်နေတဲ့…မီမွန့်ရဲ့ပေါင်ကြားကို…မျက်နှာလေးအပ်ပြီး မြတ်မြတ်နိုးနိုး နမ်းလိုက်တယ်။
“No..သူ့လရည်တွေက သဲတင်ပါးမှာ…ပန်းထုတ်သွားတာ…ကို ရှုကြည့်”
ဝေမင်းကမီမွန့်တင်ပါးကိုအားနဲ့ညှစ်လိုက်တယ်….ပြီးတော့မှောက်ခုံလေးဖြစ်နေတဲ့…မီမွန့်တင်ပါးနှစ်ဖက်ကိုဖြဲပြီး…အရည်ကြည်တွေစို့နေတဲ့…အရေးပြားဖုံးနေတဲ့ညီလေးကို… တွင်းဝကို ချိန်ပြီး ထိုးထည့်လိုက်တယ်။
သူက…သူလာခဲ့မယ်ပြောတော့…သဲက သူအဲလောက် လုပ်မယ်လို့ဘယ်ထင်မှာလဲ…. ပြီးတော့..သူကမလာခင်ထဲက သူများတွေ…ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကြည့်လာတာ…ပိုင်ပြီဆိုမှ သဲကိုလုပ်တာ…
“မီမွန်ဘာမှမပူနဲ့…Incharge တွေမရှိဘူး…ဒီအခန်းCheck outလုပ်တာလဲ…Receptionကလဲချက်ချင်းမသွင်းဘူးသိလား…”
(ဟုတ်တော့လဲဟုတ်သည်…မီမွန်လည်းအခန်းရှင်းတာ ပြီးသလောက်ဖြစ်နေတာ…အခန်းက..မနက်၁၀နာရီလောက်ဝင်ပြီး…လုပ်ပြီးထမင်းစားပြန်သွားတာ။အိပ်ယာခင်းတောင် မတွန့်ဘူး..အောက်နားလေးပဲ ….နည်းနည်းဆွဲဆန့်လိုက်တာ လုပ်နေကျလေ….DayUseတွေက..အခန်းသိပ်မသုံးလို့ဂျာကြီးက…မလိုအပ်ရင်ဆွဲဆန့်လို့မှာသွားတာ…ရေချိုးခန်းကတော့ ရှင်းပြီးသွားပြီ)
“အိပ်ယာခင်းကို….ကုန်းပြီးဆွဲဆန့်တုန်းနောက်ကနေလေ… ကိုညီကမီမွန့်ကိုအတင်းဖက်ပြီး…နို့တွေကို ညှစ်တာ…..သိလား ကို”
“သဲကိုပေါင်ကြားကိုစမ်းတော့…သဲလည်းအတင်းရုန်းတာပဲ ကိုညီက အရမ်းသန်တယ်…”
“မီမွန်ရယ်တဲ့ နင်က နင့်ဘဲနဲ့လုပ်ဖူးနေတာပဲ.ငါလုပ်ချင်တယ်”
“ကိုညီ နဲ့လုပ်တော့ ကောင်းလား”
“ကိုကတော့လေ…မကောင်းနေမလား။သဲဟာလေးကကျပ်နေတာ…သူ့ခမျာအသက်တောင် မရှုနိုင်ဘူး….ဒါတောင် အိမ်ထောင်ရှိလို့”
“အင်းအဲထိပဲလေ… သူလဲမြန်မြန်လုပ်ပြီး…သဲတင်ပါးပေါ်မှာ အရည်ထွက်ပြီး….မြန်မြန်ပြန်ထွက်ရတာပေါ့…”
အဲနေ့ကတော့နှစ်ယောက်သား…အိမ်စောစောပြန်ရမယ်ဆိုတာနဲ့…တစ်ခေါက်ပဲလုပ်ပြီးပြန်လာခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်လေ တစ်ခေါက်ဆိုတာလဲ..ကျေနပ်မှုအပြည့်ရတယ်။မီမွန်လည်း..အဲ့အရသာကိုကြိုက်တယ်။နှစ်ယောက်လုံးကြိုက်တာပါပဲ….စိတ်တူကိုယ်တူ ချစ်သူတွေလေ။
လက်ထပ်တယ်ဆိုပေမယ့်လဲ…ဟန်းနီးမွန်းထွက်ပြီးတော့… သူ့အိမ်ကိုယ့်အိမ်တစ်လှည့်စီနေဖြစ်ကြတာပေါ့။Taxiကရတဲ့ ပိုက်ဆံက…ဘဝတစ်ဆစ်ချိုးပြောင်းဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။လက်ထပ်ပြီး…၃လလောက်ရှိမလားမသိ။ဝေမင်းလည်းဟိုက ခေါ်တာနဲ့ထွက်သွားတာပါပဲ။ဝေမင်းအိမ်က…ဝေမင်းအခန်းမှာတော့ မီမွန် သိပ်မနေဖြစ်ဘူး။
မီမွန်လဲအလုပ်မှာ…ကိုညီနဲ့မကောင်းတာတွေမလုပ်ဖြစ်တာ ကြာပါပြီ။လူမလစ်တာလဲပါတာပေါ့။ပြီးတော့…ဟိုတယ်ကလဲနောက်တစ်လုံးဆောက်နေတော့….ကိုညီလဲအဲဖက်မှာကျနေတာများတယ်။လက်ထပ်ပြီးတော့…သူလဲနည်းနည်းတော့ ရှောင်ပါတယ်။.မီမွန်လဲ…လက်ထပ်ပြီးခါစကတော့…ပျော်လဲပျော်…ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ပဲဆိုတော့..ဘာအကြောင်းနဲ့မှမဟုတ်ပဲနဲ့ပုံမှန်အတိုင်းပဲနေဖြစ်တယ်။
အဲဒီ့အချိန်မှာဂျာကြီး..ကြည့်လိုက်တဲ့အကြည့်တွေက… မီမွန့်မျက်လုံးထဲကနေ…ရင်ထဲမှာအလိုလိုသိလိုက်တာက….ညီမလေးတောင်ကြုံ့သွားသလို ခံစားလိုက်ရတယ်။
“နှစ်လလောက် ရှိပြီ ဂျာကြီး…”
ဝေမင်းခမျာလဲ…သူ့မိန်းမလေးကိုစိတ်မချရှာတော့….မသိတဲ့လူတွေနဲ့…သူမရှိတုန်းဖြစ်လို့…သူများတွေသိသွားမှာရယ်စိတ်ချရတဲ့လူဆိုလုပ်…..ပြီးရင်သူ့ဆီကိုမီမွန့်မျက်နှာမပါတဲ့…. VDO ဖိုင်ပို့ပေးရမယ်ဆိုပြီး…ခွင့်ပြုထားတာဆိုတော့… မီမွန့်အကြိုက်ပေါ့။
“ကိုညီ ဟိုတယ် အသစ်ဖက်ကို မလာဘူးလား”
“ဒါဆို ဒါပဲ အားရင် လာခဲ့ဦး”
ဂျာကြီးလာမယ်ဆိုတော့…အောက်ကနှစ်ယောက်ကို…သက်ဆိုင်ရာအထပ်တွေမှာDeepCleaningလုပ်ဖို့ပြောပြီးစာရင်းဇယားတွေ ပြင်ထားလိုက်တယ်။တော်သေးတယ်…ကိုညီဆီ ဖုန်းဆက်လိုက်တာ…တော်ကြာတစ်ခုခုအမှားတွေ့သွားရင်…လာမှ..ကိုယ်ကအလုပ်လုပ်ရဲ့သားနဲ့ အပြစ်ပြောခံနေရမှာ..
စကားပြောနေရင်းနဲ့…….ဂျာကြီးကကေတီဗီရောက်ဖူးလားမေးတော့…မရောက်ဖူးဘူးဂျာကြီးဆိုတော့…..ညနေငါလိုက်ပို့မယ်ဆိုပြီး..ဖြစ်လေရော…..စားနေကျကြောင်ပါးကြီးဆိုတော့..အနေအထားကိုကြည့်တာနဲ့မျက်လုံးကိုကြည့်တာနဲ့…နည်းနည်းတော့သဘောပေါက်တယ်.။အဲဒါနဲ့..ဂျာကြီးရှေ့မှာပဲ……ဝေမင်းကို ဖုန်းခေါ်လိုက်တယ် ။
ကိုရေ….ဒီမှာဂျာကြီးကမီမွန့်ကို….ကေတီဗီလိုက်ပို့မလို့တဲ့… (ဂျာကြီးကိုကြည့်တော့…ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေတာ….ဖန်ပါတယ်ဆိုမှ…သူ့ယောက်ကျားကိုလှမ်းပြီး…သံတော်ဦးတင်ရတယ်လို့ထပြီးသွားမလို့ရှိသေး…မီမွန်ကမျက်စိတစ်ဖက်မှိတ်ပြီး…လက်ကာပြတယ် ခဏစောင့်ပေါ့ဆိုပြီးပေါ့)
ဝေမင်း ။ ။ ”မီမွန်တစ်ယောက်တည်းလား..”
မီမွန် ။ ။ ”ဟုတ်တယ်ကို အလုပ်ကလူတွေပါတယ်…”
ဝေမင်း ။”ဂွင်တွေ့ပြီးပေါ့….နောက်ကျရင်…အိမ်မပြန်နဲ့တော့ တစ်ခါတည်းလုပ်ပလိုက်တော့”
မီမွန် ။ ။ ”ဂျာကြီးလည်းပါတယ်..”
ဝေမင်း ။ ။” ရီကော့ ယူခဲ့”
မီမွန် ။ ။ ”ဟုတ် ဒါပဲနော်…”
အနောက်ဖက်ကိုလျှောက်သွားတော့…လှေကားလေးရှိတယ်။နှစ်ထပ်အဆောက်အဦးအပေါ်တက်ဖို့ဆိုပြီး…အဲကနေ တက်လာတော့ ….
အထဲကသီချင်းသံကတော့DJအသံနဲ့…တံခါးခေါက်လိုက်တယ်။.ခနနေတော့…အထဲကနေလော့ကိုဖြုတ်လိုက်သံကြားရတယ်။မိုက်တယ် ကိုယ်ပိုင် အခန်းလိုပေါ့……
“အေးငါစောင့်နေတာ နှစ်နာရီလောက် ရှိပြီ”
ဂျာကြီးနဲ့နှစ်ယောက်ထဲကျန်ခဲ့တော့…ဂျာကြီးကရီမုဒ်ကိုကိုင်ပြီးပြောင်းလိုက်တော့…ရုပ်ရှင်ဖက်ကို….ပြီးတော့ အသံကို အကျယ်ကြီးမဟုတ်ပဲ…..နည်းနည်းလျှော့လိုက်တယ်။
“အင်း…ဒီနေရာကဆက်ရှင်နဲ့ဖွင့်တာမဟုတ်ဘူး..ဟိုတယ်လိုပဲ ယူရင်တစ်ရက်လုံးယူရတာ…ဈေးကလဲ ကြီးတယ် သီချင်းဆိုလဲရတယ်.. ရုပ်ရှင်ကြည့်ချင်လဲ ရတယ်…. ညကိုးနာရီလောက်ကျရင် စောင်တွေ လာပေးမယ်ပေါ့…”
မီမွန်လဲငြိမ်သွားတယ်.(စိတ်ထဲကလဲ.သူနဲ့ကိုယ်နဲ့က အလုပ်မှာဆိုရင်လဲ…အဲလိုဆက်ဆံရေးမျိုးလဲမဟုတ်ဘူး။ ပြီးတော့…ကေတီဗီသွားမယ်ဆိုပြီးခေါ်လာတယ်…ပြီးတော့ ဟိုတယ်လိုအခန်း….ကိုယ်ကလဲမသိရင်ကြေးစားတစ်ယောက်လို…ဘာမှန်းညာမှန်းမသိလိုက်လာတယ်။သေချာတာကတော့…ဒီညလုပ်ဖြစ်ကြမယ်။သူကဘယ်လိုစမှာလဲ…ပြီးတော့ ဘယ်လို လုပ်ကြမှာလဲဆိုပြီး..တွေးနေမိတယ်….)
တံခါးခေါက်သံနဲ့ဖုန်းကနာရီကိုကြည့်လိုက်မိတော့…၉နာရီထိုးနေပြီ။ဂျာကြီးကတံခါးဖွင့်ပြီး…စောင်နှစ်ထည်ကိုလှမ်းယူတယ်။ပြီးတော့..အော်ဒါထပ်မှာတယ်ထင်တယ်။ခဏနေတော့…… ကောင်လေးက ဘီယာပုလင်းတွေ လာပို့တယ်။
အမြည်းတွေကတော့ကျန်သေးတယ်။ဘာမှာဦးမလဲဆိုတော့ …ခေါင်းပဲခါပြလိုက်တယ်။ဝိတ်တာကောင်လေးထွက်သွားတော့…ဂျာကြီးကတံခါးကိုလော့ချလိုက်တယ်။ပြီးတော့… မီမွန့်ဘေးနားမှာထိုင်ချကာ…တစ်ခါတည်းဖက်ပြီးမီမွန့်နှုတ်ခမ်းတွေကိုလာနမ်းတယ်။
မီမွန်တို့…အငမ်းမရ နမ်းကြတယ်…..ဂျာကြီးကော..မီမွန်ပါ ခနနေတော့…….နှစ်ယောက်သားအဝတ်အစားတွေ….မရှိတော့ပါဘူး။
မီမွန့်ရဲ့ဖုန်းကို…ကင်မရာဖွင့်ပြီးလှမ်းပေးလိုက်တယ်။ဗီဒီယို ရိုက်ပေးဆိုပြီးတော့……ဂျာကြီးရဲ့ ကြီးမားပြီးကော့နေတဲ့ လီးကိုစုပ်ပေးတယ်။ဂျာကြီးလဲ…ကြာကြာမခံနိုင်ဘူး။မီမွန့်ကလှတော့….စိတ်တွေကြွပြီး…မီမွန့်ပါးစပ်ထဲမှာပြီးသွားတယ်။ကင်မရာနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ထားတာကိုပြန်ကြည့်တော့…..ဘာလုပ်မလို့သူများတွေမြင်ဦးမယ်..ဆိုတော့မီမွန့်ယောက်ကျားဆီပို့မလို့ဆိုတော့…
သက်ပြင်းချပြီး…”တော်သေးတာပေါ့…ငါကလန့်သွားတာ….နင့်ယောက်ကျားက ကွတ်ကိုး ပေါ့”
မီမွန့်က….ကင်မရာကိုဂျာကြီးလီးနားကပ်ပြလိုက်တော့…ဝေမင်းမျက်ခုံးပင့်သွားတယ်။ပါးစပ်ကလဲ…မနည်းပါလားလို့အသံထွက်သွားတယ်။အဲအချိန်မှာဂျာကြီးက…မီမွန့်ကိုမှောက်ခံဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး….အောက်ဖက်ကိုဆွဲလိုက်တော့…ခြေထောက်ကအောက်မှာ…အဲ့အချိန်မှာဂျာကြီးက…မီမွန့်လက်ထဲကဖုန်းကိုလှမ်းယူပြီးတော့……ဘေးနားကနေမြင်ရတဲ့နေရာမှာချိန်လိုက်တယ်။ဝေမင်းကိုလဲ…မြင်ရတယ်…..ဝေမင်းကလဲ အကုန်လုံးမြင်ရတဲ့ View ပေါ့။
ပြီးတော့သူ့တံတွေးတွေကို..လက်ဝါးထဲထွေးထည့်ပြီး……သူ့လီးမှာရွှဲနေအောင်သုတ်လိုက်တယ်။သုံးယောက်သား…..ဘာစကားမှမပြောကြဘူး။ကိုယ့်အာရုံနဲ့ကိုယ်….ဂျာကြီးကဖုန်းကိုယူပြီး..ကင်မရာကိုအနောက်ကင်မရာပြောင်းတော့…ဝေမင်းမျက်နာကို မြင်ရတယ်။ဝေမင်းက…မီမွန်ရဲ့ ဖြဲထားတဲ့ ဖင်ကြားကိုမြင်ရတယ်။စောက်ဖုတ်ကဖေါင်းကားလို့…ဝေမင်းလီးမှာလဲ..လရည်တွေကစို့လို့လေ။
ဂျာကြီးကမီမွန့်ခေါင်းရင်းမှာလိုးနေရင်းနဲ့ဖုန်းကိုထောင်ထားလိုက်တယ်။ကင်မရာလဲပြန်ချိန်ရင်းနဲ့..ဒီတစ်ခါဝေမင်းဖက်ကမြင်ရတာကတော့…ရှေ့တည့်တည့်မှာ..သူ့မိန်းမမီမွန်နောက်ဖက်မှာက…သူ့မိန်းမကိုလိုးနေတဲ့ ဂျာကြီး …
ဖင်ထဲကိုဖြည်းဖြည်းချင်း…ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်…ရှုံမဲ့လိုက်မျက်လုံးစင်းသွားလိုက်နဲ့မီမွန့်မျက်နှာ..နောက်တော့ခက်သွက်သွက်ဆောင့်လာတဲ့… ဆောင့်ချက်တွေ…မျက်လုံးတွေက ဝေမင်းဖက်ကိုကြည့်လိုက်…စင်းကျသွားလိုက်နဲ့…
နောက်ဆုံးမှာတော့ဂျာကြီးရဲ့…သက်ပြင်းချသံနဲ့အတူ..မီမွန့်ပေါ်ကိုမှောက်ကျသွားတယ်။ဝေလင်းရဲ့လက်လဲ…အောက်မှာ လှုပ်ရှားရင်းနဲ့သုတ်ထွက်ကုန်တယ်။မီမွန့်ဖင်ထဲမှာတော့.. ညှစ်ညှစ်ပြီးထုတ်နေတဲ့လရည်တွေက….ဖင်ထဲကိုဝင်လို့..